मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधीसभामा विजयी भएका एमाले नेता कृष्णप्रसाद दाहाल अब बन्ने सरकारको मन्त्री बन्छन् वा बन्दैनन् भन्नेमा मकवानपुरमा चर्चा छ । चुनाज जितेपछि मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर बधाई लिदै मतदातालाई धन्यवाद दिएपछि उनी अहिले विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भइरहेका छन् । एमालेको तीन नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य रहेका दाहालको जन्म वि.सं.२०२० साल असारमा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, ठिङ्गनमा भएको हो । जनता मावि फापरबारीबाट मावि तहको शिक्षा आर्जन गरेका दाहालले वीरगञ्जबाट आइए गरेका हुन् । तत्कालीन माले विद्यार्थी सङ्गठनबाट २०३७ सालमा राजनिती.सुरु गरेका दाहालले २०४३ सालमा ठिङ्गन गाविसको जनपक्षीय प्रधानमञ्च भएर काम गरे । वि.सं.२०४८ र २०५६ सालको निर्वाचनमा पनि मकवानपुरबाट निर्वाचित भएका उनी वि.सं.२०५४ देखि २०६६ सम्म एमाले मकवानपुरको नेतृत्वमा रहे । यस पटकको चुनावमा राप्रपा अध्यक्ष एवम् उर्जामन्त्री कमल थापालाई ५ हजार ९ सय ७३ मतान्तरले पराजित गरेर दाहाल थप चर्चामा आए । तीन पटक कमल थापालाई पराजित गरेका दाहालले हालसम्म मन्त्री पद भने पाएका छैनन् । यसैले पनि मकवानपुरबासीले अबको सरकारमा उनी मन्त्री बन्लान् भन्ने चासोका साथ हेरेका छन् । सांसद दाहालसंग मकवानपुरको विकास योजना तथा विभिन्न सवालमा मध्यस्थताका लागि शिव चौलागाईंले गरेका कुराकानी :
तपाईं सांसद भएपछि मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा बधाई लिन तथा मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि पुग्नुभयो । कस्तो प्रतिकृया पाइरहनुभएको छ ?
निर्वाचित भएपछि हामी स्वभाविक रुपमा हामीलाई जिताउने जनताका बिचमा पुग्यौं । उहाँहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन तथा आभार व्यक्त गरियो । जनतामा एक किसीमको आशा पलाएको छ । नेपालमा लामो समयदेखिको सङ्क्रमणकाल समाप्त भयो, स्थीर सरकार बन्ने भयो भन्ने जुन आशा पलाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा जनताको जनादेश नपाएपछि बसिरहेको कारणले वामपन्थीको बिचमा हुन लागिरहेको एकता कतै भाडिने पो हो की तथा हामीले वामपन्थी एकता गर्नका लागि दिएको मत खेर जाने हो की भन्ने आशङ्का रहेको पनि पाइयो । हामीले वामपन्थी एकता भाँडिदैन, नेपाली काङ्ग्रेसले जतिसुकै व्यवधान खडा गरेपनि जनताको मतको अपमान गर्ने ताकत कसैसंग हुदैन, हामी कुनै पनि राज्यको बागडोर सम्हाल्नका लागि पुग्छौं र पार्टी एकतालाई हामी अरु मजबुत बनाउँछौं । चुनावका लागि बनाइएको गठबन्धन एकतामा परिणत हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्ने काम गरियो ।
जनताले मुलुक परिवर्तनको ठूला-ठूला कुरा भन्दा पनि आफ्नो जीवनस्तर सुधारियोस भन्ने चाहना राख्छन् यस्ता गुनासामा कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?
स्वभाविक रुपमा जनताका धेरै आवश्यकता छन् । कयौं जनताको सानो सानो माग भएपनि पूरा भए हुन्थ्यो भन्ने छ, धेरै ठूलो माग पनि छैन । कतै खानेपानीको समस्या, कतै बेरोजारी, कतै खहरेका कारण समस्या छ । म निर्वाचित भएको क्षेत्रका कतिपय जनतासंग जग्गाधनी पुर्जा छैन । भूकम्पले भत्काएको घर बनाउँनलाई आफूसंग प्रमाणपुर्जा नभएकाले अहिले समस्या भएको छ । सरकार नापी गर्छ पुर्जा दिदैन, त्यसको दण्ड जनताले पाउँनु परेको विरोधाभासपूर्ण कुरा छ । यी धेरै विषयमा जनताको बिचमा अन्तरक्रियाका रुपमा रहेका छन् र समस्या समाधानका निम्ति हामीले पहल ग¥यौं पनि । जति पहल गरेपनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको निर्देशिका बाधक बनिरहेको छ । अहिलेको विद्यमान सरकारले त्यो गर्नसक्ने मानसिकतामा पनि छैन र उसलाई गर्न जनादेश पनि छैन । यही प्राधिकरणको स्पष्ट नीति नहुनाले बकैया र बागमती गाउँपालिकाका भूकम्प पीडित कयौं जनताले घर बनाउँन नपाएको परिस्थिती छ । यस्ता यावत समस्याहरु अन्तरक्रियाका बिचमा छ हामी जन प्रतिनिधीसंग उहाँहरुले राख्नुभएको आशालाई पूर्णता दिनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।
चुनाव अघि जनताका बिचमा जाँदा जनताको दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गर्ने खालका सपना बाँडिएको थियो । आर्थिक सम्वृद्धि विकासको नारा थियो । मकवानपुर विकासका लागि तपाईंसंग कस्तो भिजन छ, भनिदिनुस् त ।
मकवानपुर राजधानीसंग ठ्याक्कै जोडिएको जिल्ला हो । यसको अनेकौं सम्भावनाहरु छन् । देशमा सबैभन्दा पहिलो औद्योगिक नगरी भएको जिल्ला पनि मकवानपुर हो । यो जिल्लालाई सामरिक दृष्टिकोणले पनि राजधानी र तराईको बिचमा रहेको छ । वातावरणीय दृष्टिकोण, हावापानीकाृ दृष्ठिकोणबाट पनि यो जिल्ला राम्रो छ । हेटौंडाको क्षेत्र विस्तार भएर अहिले उप महानगर बनेको छ । यसलाई महानगरपालिकाका रुपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरु छन् । पाँच वटा गाविस थपिएर बनेको हेटौंडा उपमहानगरको फुर्केचौरदेखि पदमपोखरी, बसामाडीसम्म आधुनिक पूर्वाधार सहितको नगरको रुपमा विकास गर्नुपर्नेछ । पदमपोखरी देखि बकैया, बागमती गाउँपालिकासम्म यो तीन वटा क्षेत्र भित्री मधेश भएर जान्छ र कयौं ठाउँ हाम्रो चुरेभन्दा उता पनि छन् । चुरेको बस्तीमा अर्को एउटा समस्या आएको छ । बकैया गाउँपालिकाको १ र २ नम्बर वडा धियालका ठूलो जनसङ्ख्या रौतहटमा बस्ने गर्दछ । त्यहाँ यो मकवानपुर, बारा की रौतहट भन्नेमा ठूलो विवाद छ । त्यहाँका जनताको चाहाना मकवानपुरमा त्यो ठाउँ मिलाउ भन्ने भएकाले यो विवाद मिलाउँनु छ । चुरे भित्रका मिलाउनुपर्ने समस्या मिलाएर प्रकृतिले जस्तो रुपमा राखेको छ त्यही रुपमा राखेर भित्री मधेशको पनि र तराईको पनि एउटा रिचार्ज सेन्टरको रुपमा विकास गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ । पूर्वाधारको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर १ कान्तिराज निर्माण कार्य अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब यसले काठमाडौंको सप्लाई रोडको रुपमा काम गर्नेछ । अर्को महेन्द्र लोकमार्ग र मध्येपहाडी लोकमार्ग रहेको छ । यो लोकमार्गको बिचमा पूर्वीक्षेत्र एक नम्बर प्रदेश र तीन नम्बर प्रदेशलाई जोड्ने भित्रि मधेशबाट धरान-चतरा-हेटौंडा बाटो बन्दैछ । यो बाटो अबको दुई वर्ष भित्रमा हामी भित्री मधेशै भित्री मधेश भएर धरानसम्म पुग्छौं । कतै कतैतिर मात्रै पहाड तिर जान्छौं । संगैसंगै बारा जिल्लामा बन्दै गरेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसंग टाइअफ हुने गरी वीरगञ्जको ड्राइपोटबाट काठमाडौंसम्म सामानहरु सप्लाई गर्ने उदेश्यका साथ द्रूतमार्ग बनिरहेको छ । यो सबै पूर्वाधारहरुले के बताइरहेको छ भन्दा हामी धेरै सम्भावनायुक्त ठाउँमा छौ. । हाम्रा पूर्वजहरुको गढीको किल्ला पनि हो यो । मकवानपुरगढी, चिसापानीगढी पनि मकवानपुर जिल्लामै छ । सेनहरुले राज्य गरेको ठाउँ पनि हो मकवानपुर । एकीकरण हुनुभन्दा अगाडी मकवानपुर जिल्ला एउटा छुट्टै राज्यको रुपमा रहेको थियो । यो सबै कुराहरु हेर्दाखेरी हामीले पूर्वाधारको सुविधाको हिसाबले हेर्दा तथा जमिनको हिसाबले हेर्दा पनि प्रदेशको राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । विगतदेखि नै हामीसंग रहेका पूर्वाधारको हिसाबले पनि हामी मकवानपुरको हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानीको रुपमा विकास गर्नसक्छौं । हामी हेटौंडालाई अरु सबै शहरभन्दा उपयुक्त शहर, उपयुक्त भूमी हेटौंडा बन्दैछ र यहाँ तराईका मान्छेहरु सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा पढ्न आउँने गरेका छन् । लोकसेवाको निस्किएको रिजल्ट हेर्ने हो भने पनि शिक्षामा राम्रो बनिरहेको छ । हेटौंडा शैक्षिक हबको रुपमा विकास भइरहेको छ । हामीकहाँ चितवनले मेडिकल सिटीका रुपमा विकास गरिरहेजस्तो चाँही हुन सकिरहेको छैन मेडिकलको क्षेत्रमा, हाम्रो अभाव भनेको यही मेडिकल सिटी हो । बढ्दो जनसङ्ख्याको हिसाबमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट अस्पतालहरुको द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्नेछ । जनतामा अहिले पनि गरिबी छ, खानेपानी समस्या छ, अघि भनिसके लालपुर्जा छैन स्वामित्वको समस्या छ । एउटा वडाबाट अर्को वडामा पुग्ने सडक भएपनि वर्षायाममा चल्न नसक्ने अवस्था छ । उत्पादन भएको चीज बजारसम्म लैजान सक्ने अवस्था छैन । हामीसंग चुनौती भनेको भएको बाटो बाह्रै महिना चल्नसक्ने बनाउँने कसरी भन्ने हो । गाउँगाउँमा मोटर पुगेको अवस्थामा विगतमा जस्तो परम्परागत खेती प्रणाली होइन, अब नयाँ आधुनिक खेती प्रणालीबाट गुणस्तरिय खाद्य पदार्थ उत्पादन गरेर बजारसम्म कसरी पुर्यायाउँन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ । र, अर्को एउटा नयाँ सम्भावनाको कुरा पनि यो अवसरमा भनिहालुँ राइगाउँबाट रौतहटको बजार क्यान्टिन, नुनथरसम्म जाने बाटो बाटो बनायौं भने हाम्रो आवागन चन्द्रनिगाहपुर हुदै आइरहनु पर्दै, अब धरान–चतरा बाटो बनिसके पछि त्यहाँबाट आउँछ । राइगाउँभन्दा तल बागमती खोलामा पक्की सात वटा पुल पन्ध्र मिनेटमा त्यो क्यान्टिनको मोटर राइगाउँमा आइपुग्छ । त्यसपछि राइगाउँबाट लामो बाटो घुमिरहनै पर्दैन, सिधै हेटौंडा आइपुग्छ । यस्तै, बेतिनीबाट अर्को बाटो बाटो लतिलपुरतिर गइरहेको छ, यहाँबाट काठमाडौं जाने भने हेटौंडा नआईकन त्यहीँबाट पुगियो । यस्तै, अनेकौं पूर्वाधारको सम्भावनाहरु अहिले मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर १ मा छ । यी पूर्वाधारलाई कसरी व्यवस्थित र गुणस्तरिय पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्न र जनताको गरिबी हटाउँन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी ध्यान दिइरहेका छौं ।
मकवानपुर विकासको यति धेरै कुरा गरिसकेपछि हेटौंडामा चर्चामा रहेको पच्चीस मिटर सडक विस्तार र सुरुङ्मार्गका विषयमा यहाँको धारणा पनि सुनौं न ।
पच्चीस मिटर सडकका सन्दर्भमा मैले पहिल्यै देखि आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएको छु, मैले बनाएको दृष्टिकोणमा पार्टीको दृष्टिकोण पनि मिल्छ । हामी के चाहान्छौं भने, बाटो साँघुरो भएर हुदैन । हामीलाई फराकिलो सडक चाहिन्छ तर फराकिलोको नाममा हामीले शहरलाई कुरुप बनाउँने कुरा पनि गर्नु हुदैन । अहिलेको सवारीको चापले अहिलेको सडकले थेग्न नसक्ने सबैले देखेका छन् । हामीसंग विकल्प नभएको भए हामी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नै सडक विस्तार गर्नका लागि लाग्नुपथ्र्यो । तर हामीसंग अर्को विकल्प छ, विकल्पमात्रै छैन की हामी धेरै सिमेन्ट उद्योगहरु ल्याइरहेका छौं । सिमेन्ट उद्योगका खानी हेटौंडा भन्दा माथिका पहाडहरु खानीका रुपमा हामी दिइरहेका छौं । प्रयोग भइरहेका खानीका जुन ढुङ्गाहरु आउँछ त्यसरी आउँदा हाम्रो राप्तीको रिभर बेड माथि माथि गइरहेको छ । यसबाट हेटौंडा यस्तो खतरनाक प्वाइन्टमा छ की कुनै पनि दिन ठूलो वर्षा भयो भने त्यो दिन हेटौंडाको भविष्य के हुन्छ भन्ने समस्या हामीसंग छ । यसर्थ, हेटौंडा प्राटेक्सन वालको पनि यतिबेला आवश्यकता छ । साथै जुन स्टान्डर्ड हाइवे हो त्यसको पनि काम गर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका छौं र चौकीटोल देखि रातोमाटेसम्म रेखाङ्कन पनि भइसकेको छ । हामीसंग प्रसस्त जमिन छ, प्राटेक्सन वालको आवश्यकता छ । अनि हामीसंग विकल्प छ भने यहाँ जनताको घर भत्काए पनि, सरकारी भवन भत्काए पनि सम्पति त राष्ट्रकै हो । यी सबै मूल्याङ्नमा जाँदा त विकल्पमा जाँदा अझ सस्तो पर्छ । तसर्थ विकल्पको सडक हामी बनाउँने र आवश्यक पर्ने जति चौडाई हो त्यो चौडाईको पनि विस्तार गर्ने भन्नेमा मेरो र पार्टीको धारणा छ । हामी यही धारणा जनताका बिचमा राख्छौं र निर्णय गर्ने तहसम्म पु¥याउँछौं ।
अनि सुरुङ्मार्गका सन्र्दभमा कुरा गर्दा हिजो दिनमा जसलाई जिम्मा दिइएको उसले गर्न नसकेपछि अब सरकारी स्तरबाटै यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । चार किलोमिटर सुरुङ् खनेपछि अरु बाटो चौडा बनाउँनका लागि त पक्कै पनि हामी सक्षम छौं । हेटौंडा–काठमाडौंको दूरी सुरुङ् बनेपछि एक घन्टा मुनि झर्छ नै ।
यी खालका अनगिन्ती विकासका मुद्घाहरु छन् । तपाईं जनप्रतिनिधी पाँच वर्षका लागि हुनहुन्छ कति पूरा गर्छु भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
हामी अब महाअभियानकै रुपमा देशको विकासलाई तिब्रता दिन लाग्नुपर्दछ । राजनितीक इमान्दारिता माथिल्लो तहमा भएपछि तल पनि सबै इमान्दार हुन्छन् । त्यस कारण मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो देशमा रहेको मेसिनरी, हाम्रो देशमा रहेको साधन र स्रोत हामीसंग उपलब्ध हुनसक्ने सम्भाव्य सहयोगका स्रोतहरु, जनताको सहभागितामूलक ढङ्गबाट हामी कति जान सक्छौं त्यो मुख्य कुरा हो । हामीले उठाएको कुराहरु पूरा गर्ने दिशामा हामी लाग्नेछौं । साधनस्रोतको कमी होला जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले अघि सारेका विकासका सबै कुराहरु पाँच वर्ष अघि नै सुरु हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर चुनावमा बाडिएका असम्भव सपनाहरु त पूरा गर्न गाह्रै हुन्छ नि हैन ?
आजभन्दा अघि विभिन्न राजनितीक दलले काल्पनिक सपनाहरु पनि बाँडे, निर्वाचित भएर गइसकेपछि त्यो पूरा गरेनन् । तर यस पटक हामी तोड्नेवाला छौं । हामीले सपनाहरु हामीले बाँडेका छौं त्यो भन्दा पनि बढी काम गर्ने हामीले प्रतिबद्घता गरेका छौं । हामीले हाम्रो देशमा रेल ल्याउँने कुरा गरेका छौं, पाँच वर्षभित्रमा रेल आउँछ । अहिले गाउँपालिकामा हामीले चालिस–पचास करोड रुपिया दिएका छौं । यो पैसाले पुग्दैन भने हामी यसलाई दोब्बर बनाउँन पनि सक्छौं । अहिले साधन, स्रोत सहित दैलोमा सरकार छ । अब प्रदेश सरकार बन्ने बितिक्कै अड्किएका कानून नियमहरु पनि बन्छन् । आवश्यक जनशक्ति पनि हामी राख्छौं । जनशक्तिलाई तालिम र गति दिन केही समय लाग्ला यसर्थ सपनाहरु अब सपनामा सिमित रहँदैनन् । सपनाहरु बरु देख्न थाल्नुपर्यो। हामीले देखेका सपनाहरु बरु अपूरा होलान् ती पूरा गर्ने दिन चाँही अब सुरु भयो ।
सरकार गठन ढिला भइरहेको छ । मकवानपुरबाट मन्त्री हुने अवसर यहाँहरुको पार्टीले पाएन । यस पटक मन्त्रीमा तपाईंको पनि चर्चा छ । तपाई कतिको आशावादी हुनहुन्छ ?
मैले राजनीति सुरु गरेको म मन्त्री बन्छु भनेर होइन, त्यसैले म मन्त्री हुन्छु भनेर घोषणा गर्दै हिड्ने कुरा होइन । तर अहिलेसम्म मैले राजनीति गरेको आधारमा, नेताहरुलाई भेटघाट गर्दाखेरीको आधारमा मकवानपुर जिल्लाले यस पटक मन्त्री पाउँछ । त्यो मूल्याङ्कन नेताहरुले गर्ने हो, म आफैं मलाई मन्त्री चाहिन्छ, म मन्त्री नभई छाड्डिन भन्ने मेरो चरित्र, स्वभाव छैन म त्यसो गर्दा पनि गर्दिन । तर एउटा कुरा चाँही म के भन्नसक्छु भने पाएको जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्नसक्ने योग्यता राख्छु, मेरो विश्वास पनि यही छ । नेतृत्वले कसरी लिन्छ त्यो नेतृत्वको कुरा रह्यो तर मकवानपुरे जनताको धारणा के हो भने यो पटक संघीय सरकारमा मन्त्री पाउँनुपर्छ भन्ने छ । जनतामा पनि वामशक्तिप्रतिको विश्वासका लागि पनि मकवानपुरले मन्त्री पाउँनुपर्छ । यस पटक सरकारमा मन्त्री पाइन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सरकार गठन ढिलाई भइरहेको छ अब कहिले गठन होला ? तपाईलाई के लाग्छ ?
संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरातिर अब नजाउँ, जनादेश के आयो त्यो त प्रष्ट छ । जनादेश आइसकेपछि पनि हाम्रो संविधानले प्रतिनिधीसभालाई सरकार बनाउँने अधिकार दिएको छ । प्रतिनिधीसभाले संघीय सरकार बनाउँने हो, राष्ट्रियसभाको सरकार बनाउँनका निम्ति कुनै भूमिका रहँदैन । राष्ट्रियसभाका सदस्य मन्त्री हुन लायक हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री छान्ने र सरकार निर्माण गर्ने कुरा चाँही प्रतिनिधीसभाको विजनेश हो । अब निर्वाचन भइसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो । संविधानको छिद्र कहाँ भेटिन्छ भनेर अहिलेको सरकारले आफूलाई सबैभन्दा लोकतन्त्रको हिमायति भन्छ । अनि हामीलाई अधिनायकवादी बन्छ । त्यत्रो चुनाव प्रचार पनि गर्यो यो तर दुनियाले अहिले देखिरहेको छ अब चाँही अधिनायकवादी को हो ? लोकतन्त्रलाई नमान्ने को हो ? जनादेशलाई नटेर्ने को हो ? जति नटेरे पनि जे गरे पनि संविधानमा भेटिएको कुरा भनेको त त्यही राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभइकन संघीय संसद बन्दैन भन्ने एउटा भेटिएको हो । अब त्यो प्रष्ट भइसकेको छ र माघ २४ गते निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनको मत पेटिका जम्मा गर्ने, अरु काम भनेर पर धकेल्ने काम भयो भने पनि फागुनको पहिलो साताभित्र मुलुकले वामपन्थी सरकार पाउँछ । र त्यसबेलासम्म पार्टी एकताको प्रकृया पनि धेरै अगाडी बढिसकेको हुनेछ ।
पार्टी एकताको कुरा छोइहाल्नु भो । जनताले आशङ्का गर्न थालिसके पार्टी एकता हुने कुरामा तपाईं त विश्वस्त हुनुहुन्छ हैन ?
हामीले राखेकै एउटा घोषणापत्र दुइ वटा राखेकै छैन । अब अहिले छुट्टाछुट्टै पार्टी भन्न पाइन्छ ? पाइदैन । त्यो छुट न नेतालाई छ, न कार्यकर्तालाई । त्यस कारण जनताको खबरदारी त आफ्नो ठाउँमा छदैछ । सबै विश्वस्त भए हुन्छ, सुरु पहिल्यै भएको पूर्णतामा अब अघि बढ्छ । गते मिती तिथी त ठ्याक्कै यहि भन्ने भएन । आज बसेर सही गरेर फुत्त निस्कने कुरा जस्तो पनि भएन पार्टी एकता भन्ने कुरा । यसमा विचार, नेतृत्वको मिलाज गर्ने कुरा आफैंमा सजिलो कुरा होइन । मलाई लाग्छ यो २०७४ सालभित्र हामीले पार्टी एकताको प्रकृया पूरा गर्छौं ।
अन्त्यमा तपाई आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले माथि पनि भनिसकेको छु की मकवानपुर अनेक सम्भावना र चुनौती रहेको जिल्ला हो । चुनौती छ भनेर डराएर बस्यो भने समाधान गर्न सकिदैन । अब हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । राजनीतिक लडाईं अब समाप्त भएको छ । अब सिङ्गो राष्ट्र निर्माण र समृद्घिमा नै जाने हो । मकवानपुर जिल्लालाई समृद्घितिर लैजानका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण, टोलटोल बस्तीबस्तीमा साना साना उद्यम सुरु गर्नुपर्यो । उद्यमका लागि व्यवसायिक तालिम केन्द्र यथेष्ठ मात्रामा हुनुपर्यो । गाउँपालिका स्तरिय, जिल्ला स्तरिय हाम्रा सम्भावनाहरु के–के छन् हामीले कोरा कल्पना गरेर मात्र भएन । वनमा आधारित उद्योग खोल्ने भए वनमा आधारित उद्योग खोल्नुप¥यो, खेतीमा आधारित खोल्ने भए खेतीमा आधारित खोल्नुपर्यो । कच्चा चिजमात्र उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने होइन, प्रशोधित चिज बजारमा पठाउँन सक्ने गरी प्राविधिकहरु गाउँ गाउँमा तयार गरेर उद्यमी बनाउँनुपर्यो । यस दिशामा हामी अब योजना बनाएर लाग्नेछौं । यसका लागि पूर्वाधारण, शिक्षा चाहिन्छ अरु आवश्यक धेरै कुरापनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि मकवानपुरमा समृद्दीका लागि दिनहरु सुरु हुन्छन् । समृद्दी भनेको खाली पैसा कमाउने मात्र भनिएको होइन, अब भान्साबाट सुरु गनुपर्छ हाम्रो हिजो के पाक्थ्यो अब के पाक्छ ? कस्तोमा हामी शौच गथ्र्यौ अब हामी कस्तोमा जान्छौं ? यी सबै कुराहरुमा यावत परिवर्तन भएपछि मात्रै विकास देखिन्छ । हाम्रा पुस्ताले कस्तो विकास देखे, कस्तो जीवन भोगे र अब हाम्रा पुस्ताले कस्तो जीवन भोग्छन् भनेर देखिने गरी हामीले परिभाषित विकास गर्छौ । यो काममा म मकवानपुर जिल्लाबासीमा आग्रह गर्न चाहन्छु–तपाईको मेहनतले मुलुकलाई एउटा सङ्क्रमणकालबाट अन्त्य भयो । त्यो मतको यहाँको कदर हुन्छ । अहिले सपथ पनि नखाई रहेको अवस्थामा यी कुरा हाम्रो मनमा छ । विकासमा कोही बाधक नबनौं, सहयोगी नबनौं । अब स्थीर सरकार आएपछि सबैले न्याय पाउँने छन् । राम्रो काम गर्नेले पुरस्कार पाउँने र नराम्रो गर्नेले दण्ड पाउँने छन् । सङ्क्रमणकालमा जस्तो जसले जे गरेपनि अब छुट पाउँने छैनन् । अब मुलुकमा बलियो सरकार, बलियो नेतृत्व र बलियो शासन–सुशासन आउँदैछ । सङ्क्रमणजन्य केही विकारहरु छन् भने त्यसको अन्त्य गर्नका लागि पनि टोलटोलमा छलफल गर्नका लागि यहाँहरु थाल्नुहोस् । अब मुलुक सुशासनमा जाँदैछ, यसमा तपाईं हामी सबैको साथ आवश्यक छ ।